Raha toa moa ka ... saika tapaka : comments » What if ...
Friday, February 4, 2011 - 17:16:56
Na izaho koa aza no tao dia mba isan’izay nitehaka sy nihomehy. Ary tena mety tapa-tsinay mihitsy aza no azo ilazana ahy. Soa fa tsy tany aho sa fa sao dia tany amiko daholo indray no nitodika ny camera sy ny fitaovana fandraketana rehetra. Raha toa aho ka…..dia tapaka.
Friday, February 4, 2011 - 22:10:45
au fond mety hoe mec bien ihany lery fa zany hoe otran’ny diso raisiny ho perso be le resaka… no hoe tsy mba manana hoe mpanolo-tsaina na hoe olona somary statezista @ ekipany…
tsy hifanomezan-tsiny fa efa diso antitra loatra izy ee… mora kizitina sy hoe sarotra tenenina
Friday, February 18, 2011 - 12:00:56
Raha toa moa ka ... tapitra »
« Raha toa moa ka ... ADOLANTSENTO [doka]